सेन्टिमेन्टल रोल मनपर्छ–अश्मि गुरुङ, नायिका – Everest Times News
सेन्टिमेन्टल रोल मनपर्छ–अश्मि गुरुङ, नायिका
गुरुङ समुदायको कथावस्तुमा आधारित फिल्म ‘नबुझिएको यो मन’ प्रमोसनका चटारोमा छिन् नायिका अश्मि गुरुङ । फिल्ममा अश्मिका नायक हुन् सुमन गुरुङ । तमु फिल्म्स प्रालिको ब्यानरमा बनेको यस फिल्म पारिवारिक प्रेमकथामा आधारित रहेको फिल्म निर्माण युनिटले जनाएको छ । लमजुङ पोखरालगायत पश्चिमको विभिन्न फिल्म हलहरुमा प्रदर्शन भइरहेको बेला फिल्मकी नायिका अश्मिलाई भने काठमाडौंमा भेटिइन् ।
स्टेज पर्फमेन्सका लागि दुबई र कतार पुगेर फर्केकी उनी अबको योजना पनि बनाउँदैछिन् । अस्मिता, सुराग, मेरो सोल्टी, माँ, यस्तै रहेछ जिन्दगी, निसानी, भेंडी गोठालो, कुटुम्बरी साइनोसहित नौवटा फिल्ममा अभिनय गरिसकेकी नायिका अश्मि आफु फिल्मी क्षेत्रमा सुरुवाती चरणमै रहेको बताउँदैथिइन् । लमजुङ घेर्मुकी अश्मि गुरुङ समुदायका कथावस्तु भएको फिल्महरुमा अभिनय गर्न मन पराउने बताउँछिन् । उनै नायिकासँग एभरेस्ट टाइम्सका लागि नेत्र तामाङले गरेको कुराकानी ः
तपाईंको अभिनय यात्राबारे हामीलाई बताउनुहोस न ।
सानैदेखि फिल्म क्षेत्रमा आउने रुचि थियो । यही क्रममा फिल्म क्षेत्रमा आइपुगे । पहिलोपटक नेपाली फिल्म ‘निसानी’मा सानो भूमिका पाएँ । त्यसपछि गुरुङ फिल्म ‘अस्मिता’बाट मुख्य भूमिकामा डेब्यु गर्ने मौका पाएँ । यसको श्रेय प्रितम गुरुङ दाइलाई जान्छ । फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भर्खर जस्तो लाग्छ । अहिलेसम्म नौ वटा फिल्म अभिनय गरिसकेछु । आफ्नो लक्ष्यअनुसारको काम गर्न पाउँदा निकै खुसी लागिरहेको छ ।
तपाईंले अभिनय गर्नुभएका फिल्महरुमा दर्शकको चाप कस्तो पाउनुभएको छ ?
गुरुङ समुदायको कथामा आधारित फिल्महरुको बजार त सानो छ । हाम्रो फिल्महरु देखाउने भनेको च्यारिटी शो, प्रवासमा गरिने प्रदर्शन, पश्चिममा पोखरा, लमजुङदेखि गुरुङ समुदाय बढी भएको ठाउँमा हो । गुरुङ समुदायले हाम्रो फिल्महरु हेर्नुहुन्छ । हामीले लक्षित गरेको समुदायसम्म फिल्म पुगेको छ । यही नै हाम्रो लागि सन्तुष्टि हो ।
दर्शक धेरै हुने प्लेटफर्म पनि छन् नि, ती क्षेत्रमा जाने योजना बनाउनुभएको होला नि ?
नेपाली फिल्मबाटै फिल्म यात्रा सुरु भएको हो । अहिले आफ्नै समुदायको फिल्मको स्वाद मिठो लागिरहेको छ । थोरै भएपनि यही क्षेत्रमा रम्ने मन छ । आफ्नै संस्कृति, आफ्नै संस्कारको फिल्ममा अभिनय गर्न पाउँदाको खुसी अरुमा कहाँ पाउन सकिन्छ र ! आफ्नै जातिको ड्रेस लगाएर अभिनय गर्दा निकै मजा लाग्छ । एकदमै राम्री भएँ जस्तो लाग्छ ।
कस्तो भूमिका बढी रुचाउनुहुन्छ ?
म धेरैजसो फिल्ममा ‘सेन्टिमेन्टल’ भूमिकामा देखिएकी छु । त्यसैले होला यही भूमिका प्रिय लाग्छ । धेरैले यस्तै भूमिका नै सुहाउने कमेन्ट गर्नुहुन्छ ।
कमाई कस्तो छ, कतिको कम्प्रमाइज गर्नुहुन्छ ?
बिना पारिश्रमिक काम गरेकी छैन । कहिलेकही बजेट हेरेर कम लिने वा कम्प्रमाइज गर्ने गरिन्छ । यति नै लिन्छु भनेर ‘रेट’ बनाएकी छैन । स्टेज कार्यक्रम र फिल्मको कामले अहिलेसम्म पुगेकै छ । चित्तबुझ्दो नै छ ।
भर्खर काम सुरु गरेकी छु । प्रारम्भिक चरणमै छ अभिनय यात्रा । सिक्दै छु । अझै धेरै काम गर्नु छ । यही क्षेत्रमा निरन्तरता दिन्छु । दर्शकको माया र प्रेरणाले यो उत्साह मिलेको छ ।
पारिवारमा कोको हुनुहुन्छ हामीलाई बताइदिनुस न ?
बुवा स्वर्गे भइसक्नुभयो । हामी आमा, तीन दिदीबाहिनी र एकजना भाई । दिदी, बहिनी र भाईको बिहे भइसक्यो ।
तपाईंको भएको छैन ?
मेरो भएको छैन । अहिले बेला भएको छैन(हाँसो) ।
त्यसोभए ‘ङोलो’हरुको प्रस्तावको ओइरो लाग्छ होला ।
अहिलेसम्म त्यस्तो ओइरो नै चै नभनौ । हाम्रा दाजुभाईहरुले अभिनय राम्रो छ, अझै राम्रो गर्दै जानु भनेर शुभकामना दिनुहुन्छ ।
भनेपछि तपाईंले आफ्नो ‘ङोलो’ छानिसक्नुभएको छ ?
अहिलेसम्म ब्वाइफ्रेन्ड पनि बनाएकी छैन(हाँसो) । यो कुरा अहिले नै नभनौं । पछि आफै थाह हुने कुरा हो नि हैन !
एरेन्ज म्यारिज कि लभ म्यारिज, तपाईं कुनको पक्षमा ?
लभ म्यारिजकै पक्षमा । किन कि लभ परेपछि मनका धेरै कुरा थाह पाइन्छ । अनि सँगसँगै जीवन बिताउन सजिलो हुन्छ ।